·2months ago ·16 Comments
PVTV အဖွဲ့သားတွေက “ပြည်သူ့စုံထောက်နှင့် သွေးစွန်းငွေများ” အစီအစဉ် အပိုင်း (၂) အဖြစ် “ပြည်သူ့စုံထောက်နှင့် မိုဂီအမှုကြီး နောက်ဆက်တွဲ” ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘာ့ကြောင့် အာဏာကိုလက်မလွှတ်နိုင်ဖြစ်နေရတာလဲ၊ ပြည်သူကို အစွမ်းကုန် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်တောင် ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာနေကြတာလဲ … ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ … သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက် အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်သူလူထုကို ဂုတ်ခွစီးပြီး ဆက်လက်ဂုတ်သွေးစုတ်ချင်နေလို့ပါပဲ။ အကြောင်းအရာက ထင်ရှားပေမယ့် အချို့သော အချက်အလက်တွေကတော့ ဝေဝါးနေသေးတာဖြစ်လို့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရအောင် ပြည်သူ့စုံထောက်ကြီးက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အောက်ဖဲတွေကိုလှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့သတင်းသမားကလဲ … ပြည်သူ့စုံထောက်ကြီးသိထားသမျှ ထိုးဆွနှိုက်ထုတ်ရင်း ပြည်သူကို သတင်းပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
2021-11-14 at 5:18 PM
swan zarni says:
2021-11-14 at 6:07 PM
သီးသန့် လုပ် ပေး ပါ လား
အခု တော့ ဘယ်ဟာ နားထောင် မှန်းကိုမသိတော့ဘူး
khing tazin says:
2021-11-14 at 6:09 PM
ပြောတာတွေစိတ်ဝင်စားဖို့အရမ်းကောင်းတယ်။ မသိတာတွေသိရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောနေတုန်း နောက်ကတီးလုံးသံ နဲ့ သီချင်းသံ မထဲ့ပေးရင်ကောင်းမယ်။
TikTok Łhæṃ HṬēṭ says:
2021-11-14 at 6:13 PM
ဒီလောက်လွယ်တဲ့ကိစ္စကိုခက်ခက်ခဲခဲလုပ်နေသေးတယ် လူကြီးမင်းရဲ့သားသမီးမြေးတွေကိုစစ်တပ်ထဲဝင်ခိုင်းလိုက်ရာထူးကြီးကြီးရလာရင်တိုင်းပြည်အတွက်ပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာ စစ်တပ်ကိုရွံမုန်းတဲ့ချီးတွင်းကြီးလို တရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေအဝင်နဲနေသမျှစစ်တပ်ထဲမှာ အဓမ္မဘက်တော်သားတွေပေါများကြီးစိုးနေမှာပါပဲ
Nay Myo Min Din says:
2021-11-14 at 7:00 PM
တီးလုံးလေး အသံ လျှော့ပေးစေချင်ပါသည်။
tun shaing says:
2021-11-14 at 8:00 PM
2021-11-14 at 8:01 PM
Hau Khen says:
2021-11-14 at 8:14 PM
kyawthu kyawthu says:
2021-11-14 at 9:57 PM
2021-11-14 at 10:56 PM
2021-11-14 at 10:57 PM
2021-11-14 at 10:59 PM
Syria မွာ. ျပည္ သူ ေတြ က ကယ္ ၾက ပါ ကယ္ ၾက ပါ လုိ႔ ေျပာ တာ. Communists သူ ပုန္း ေတြ ဝုိင္း ခ် ေန လုိ႔ မ ကယ္ တဲ့ အ ျပင္. Syria ကုိ. Russia လက္ ထဲ ကုိ ထည့္ လုိက္ တယ္. ဒီ မုိ က ေရး စီ လုိ႔ ေျပာ တဲ့. ႏုိင္ ငံ ေတြ က က ငုတ္ ထုတ္ ထုိင္ ၾကည္ ေန တယ္ ၿပီ ေတာ့. Russia China နဲ႔. စီး ပြား ေရး လုပ္ လုိက္ တာ ေျပာ မ ေန ပါ နဲ႔ ေတာ့. …
Chinese wuhan Covid -19 နဲ သတ္ တာ5million over kill2trillion damage
ဘယ္ သူ မွာ. အ ေရး ယူ မဲ့ လူ မ ရွိ တဲ့ အ ျပင္ ……. Communist ေတြ .အာ ဏာ ေတြ လုိက္ သိမ္း. လုိက္ တာ. HK , Sudan , Myanmar , Twain , software companies ေတြ ေပါင္ ၿပီ US ကုိ သိမ္း လုိက္ တာ etc ……
အဲ့ ဒီ ထက္ ဆုိး ရိမ္း စ ရာ ေကာင္း တာ က india က russia ရွိ က 400 – missle launchs ေတြ ကုိ လက္ ခံ ယူ ေန တယ္. India က. အ ေရ ျခဳံ. ဒီ မုိ က ေရ စီ ျဖစ္ ေန တာ သုိး အ ေရ ျခဳံ. ထား ေသာ. ဝံ ပု ေလြ မ်ား. ….https://youtu.be/_P78t6olZQs
Mr. Sasakawa အခုတစ်ခေါက် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်တဲ့အချိန်ဟာ စစ်ကောင်စီက ခန့်တဲ့ သံတမန် ငါးယောက်ကို ဂျပန်အစိုးရက အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
Wewe Bazss says:
2021-11-15 at 9:48 AM
ေက်းဇူတင္ပါတယ္ ျပည္သူ႔သူရဲးေကာင္း ပညာရွင္အားလံုး။
2021-11-17 at 9:44 AM
Sabai Kyi says:
2021-11-18 at 12:04 AM